MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2012-10-21
အောက်တိုဘာ၂၅ ရက်နေ့ကျရောက်သော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တော်လှန်ရေး (၅၂) နှစ် ပြည့် အထိန်းအမှတ်နေ့ကို ထောက်ခံ သည့် အနေဖြင့် ၎င်း၏ လက်နက်ကိုင်ဌာန ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ (KIA)မှ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား-မန်မော် (ဗန်းမော်) လမ်းရှိ မြန်မာအစိုးရတပ်စခန်းများကို အမြောက်များ ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာနှင့် လိုင်ဇာ-မန်မော်ကြားရှိ မြန်မာအစိုးရတပ်စခန်း များသို့ KIA တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် တပ်ရင်း ၁၉၊ ၂၄ နှင့် ၂၅ များမှ ၆၀ မမ အမြောက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အထိန်းအမှတ်နေ့ကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ၎င်းဝန်းကျင်တွင်ရှိသော မြန်မာအစိုးရတပ်စခန်း ၈ ခုတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ စခန်းတစ်ခုတွင် ၆၀ မမ အမြောက်ဖြင့် ၃ ကြိမ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းအရာရှိ တစ်ဦး KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
at 10/27/2012 12:11:00 PM No comments:
at 10/26/2012 11:15:00 PM No comments:
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်တို့ တရုတ်ပြည် ရွှေလီမြို့ တွင် ထပ်မံ တွေ့ဆုံရန် သဘောတူညီမှု ရထားကြောင်း သတင်း များ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲ များ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သည်။
လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင် မင်း ဦဆောင်သော ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီနှင့် ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့၌ ပြန်လည်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
at 10/26/2012 05:25:00 PM No comments:
at 10/26/2012 05:11:00 PM No comments:
at 10/25/2012 09:44:00 PM No comments:
at 10/25/2012 09:33:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား-ဒေါ့ဖုန်းယန်လမ်းမကြား ဖာဂီ (Hpa Gyi) ကျေးရွာအနီး အောက်တိုဘာလ၂၃ ရက်တွင် အစိုးတပ်ကား ၁ စီးဖြင့် အင်အားဖြည့်လာချိန် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်မဟာ (၅) အောက် တပ်ရင်း (၂၄)မှ မိုင်းဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ အစိုးရတပ်မှ ကားပျက်ဆီးပြီး အများအပြားသေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရ ဒေါ့ဖုန်းယန် ခြေလျင်တပ် ခလရ (၁၄၂) တပ်မှ ၂ မိုင် ကျော်ရှိ ဖာဂီကျေးရွာအနီးတွင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA ရှေ့တန်းမှ အရာရှိတဦး KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“ကားအားလုံးပျက်စီးသွားတယ်။ အယောက် ၂၀ ကျော်လောက် ကားထဲ မှာ ပါတယ်။ အချို့က ခြေကျင်နဲ့သွားကြတယ်။”
at 10/25/2012 03:59:00 PM No comments:
စစ်ရေး တင်းမာမှု အခြေအနေများကြောင့် ဆွေးနွေးရန် အဆင်မပြေဖြစ် နေသည့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့(KIO) နှင့် အစိုးရ ငြိမ်း ချမ်းရေး အဖွဲ့တို့အကြား ထပ်မံ၍ နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည့်နေ့ရက် သတ်မှတ် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တွေ့ဆုံမည့် နေရာကို တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ရွှေလီမြို့ကို ရွေးချယ်ထား ပြီး ယခုလ ၃၀၊ ၃၁ ရက်နေ့များတွင် ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ် ၍ နှစ်ဖွဲ့လုံး တွင် စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး တာဝန်ရှိသူများအပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုး ဆောင်များလည်း လိုက်ပါမည်ဟု သိရသည်။
“သမ္မတရုံးကို တိုက်ရိုက် အကြောင်းကြားတယ်၊ ကျနော်တို့ဆီကို မိတ္တူပို့ တာ၊ တွေ့မယ့်နေရာက ရွှေလီမှာပါ၊ ကျနော်တို့ သွားပြီးမှ စီစဉ်ရမှာ ပေါ့”ဟု ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့(PCG) မှ ဦးဆန်း အောင် က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
at 10/24/2012 08:45:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး အစစ်အမှန် ဖြစ်ရေး အတွက် အချက် (၃) ချက် ပါသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ အစီစဉ်ကို ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) က အစိုးရထံ အကြောင်း ပြန်ထားကြောင်း အမည်မဖေါ်လိုသော ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တဦးက ပြောပါသည်။
“ ဦးအောင်မင်း တို့ကတော့ အောက်တိုဘာ (၁၀) ရက်နေ့မှာ ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် သူတို့ အရင် ကမ်းလှမ်းတယ်။ ကျနော် တို့ကလည်း (၁၁) ရက်နေ့မှာ သဘောထား ပြန်စာကို ပို့လိုက်တယ်။ တရားဝင် လမ်း ကြောင်း ကနေဘဲ ပို့လိုက်တာပါ။ ခက်တာက ငြိမ်းချမ်းရေး စကားကို အသုံးမချ စတမ်း ဖြစ်စေချင်တယ်။ ကျနော်တို့က တကယ့်ကို ငြိမ်းချမ်း ရေး လိုချင် နေတာပါ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်က လက် တွေ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာကိုဘဲ တင်ပြ နေတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
KIA ၏ ပြန်စာထဲမှ တောင်းဆိုချက်များမှာ--
at 10/24/2012 03:26:00 PM No comments:
A series of skirmishes have taken place between Kachin Independence Army and Burmese Government Army in recent days despite the prospect ofameeting in Chinese border town Ruili where withdrawal of government troops invaded in Kachin territory will be discussed. Burmese army’s increased presence has been reported from various local sources. All Burma Students Democratic Front (ABSDF), an ally of KIA, said Burmese army has been transporting
at 10/24/2012 02:48:00 PM No comments:
at 10/24/2012 12:04:00 PM No comments:
at 10/24/2012 12:02:00 PM No comments:
အောက်တိုဘာ (၂၄) ဗုဒ္ဓဟူး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - ဖားကန့်လမ်း ကားမိုင်းမြို့အနီး မဒဲန်ကျေး ရွာတွင် အောက်တိုဘာ (၂၂) ရက်နေ့ ဗမာအစိုးရ၏ တပ်မ (၈၈) မှ စစ် ကြောင်းများရောက်ရှိလာပြီး ရွာသားများ၏ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများကို လုယူပြီး၊ ရွာသူရွာသားများ ကိုလည်း ညှင်းပန်းနှပ်စက်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ အောက်အိုဘာ (၂၂) ရက် ည (၈း၀၀ မှ ၉း၀၀) နာရီအတွင် ဗမာစစ်သားများမှ မဒဲန်ရွာမှ ကချင်နှစ်ခြင်း သင်းထောက်ဆရာ ဦးလဟီး ခေါင်ဒေါင် နေအိမ်မှ ဦးလဟီးခေါင်ဒေါင်၏ အမှုတော်ထမ်း (၂၅) နှစ်ပြည့် ဂျူဗလီ အထိမ်းအမှတ် ရွှေလက်စွပ် (၂) ကွင်း၊ နားဒေါင်း (၁) စုံနှင့် အ၀တ်အစားများကို လုယူသွားကြောင်း၊ ဆက်လက်ပြီး ဦးထိန်မန်ယော် ၏ ဈေးဆိုင်မှ ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဗမာစစ်သားများ ကြိုက်နှစ်သက် ရာ များကို ယူသွားပြီး၊ ကျန်ပစ္စည်းများကို အကုန်ဖျက်ဆီးထားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်သားများမှ မဒဲန်ကျေးရွာသား ဦးဇခုန် ဇော်ခါး (အသက် (၄၀) ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
ဤဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် မဒဲန်ကျေးရွာမှ ထွက်ခွာသွားပြီး နန့်ဟိုင် ကျေးရွာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်အင်းအား (၄၀) ခန့်က လွယ်ဆိုင်ရွာတွင်နေရာယူထားကြပြီး၊ အင်အား (၃၀) ခန့်မှာ မိုက် ခရိုဝေ့ပ်ရှိရာ တောင်ကုန်းပေါ်တွင်နေရာယူထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါ သည်။ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များ သည် ဘွမ်ဆိုင်း တောင်ပေါ်တွင် လက် နက်ကြီးများတပ်ဆင်ရန် ပြင်ဆင်နေလျက်ရှိကြောင်းလည်း သတင်းရရှိ ပါသည်။